﻿﻿	သားကြောဖြတ်ခြင်း | Find My Method
နောင်အနာဂတ်တွင်ကိုယ်ဝန်မလိုချင်သောသူများအတွက် အမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကိုယ်ခန္ဓာများအတွက် ရရှိနိုင်သည်။
ထိရောက်မှု- အလွန်ထိရောက် ဤနည်းလမ်းများဖြင့် လူ ၁၀၀ လျှင် ၁၀၀ တွင် ၉၉ ဦး သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာတားဆီးနိုင်လိမ့်မည်။.
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – လုပ်ဆောင်မှုပြီးနောက်ချက်ချင်း နာကျင်မှုဖြစ်နိုင်၊
အားထုတ်ရမှု- နိမ့်။ လုပ်ဆောင်မှုရရှိပြီးတပြိုင်နက် ပြီးစီးပါပြီ
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STIs) မှ ကာကွယ်ခြင်းမရှိပါ။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး သားကြောဖြတ်ဖို့ ဝင်ပါနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် သားကြောဖြတ်တာဟာ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်အောင် မျိုးဥပို့ပြွန်fallopian tubes ကိုပိတ်ပစ် (သို့) တားပစ်လိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားများအတွက် သားကြောဖြတ်တာကို vasectomy လို့ခေါ်တယ်။ အမျိုးသားရဲ့သုက်ပိုးကိုသယ်ပို့တဲ့ပြွန်တွေကို ပိတ်ဆို့လိုက်တယ်။ အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်တွေနှင့် စောင့်ရမယ့်ကာလ စတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာမေးမြန်းဖို့နဲ့ ပိုမိုလေ့လာဖို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ပြောဆိုပါ။
ခွဲစိတ်ခြင်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး ခွဲစိတ်ပြီး သားကြောဖြတ်ဖို့ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက် Laparoscopy၊ Mini-Laparotomy နှင့် Laparotomy တို့ဟာ ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါတွေလုပ်ဖို့ မေ့ဆေး လိုအပ်တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီး ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ ၂ ရက်ကနေ ၂၁ ရက်အတွင်း တနေရာမှာဖြစ်နိုင်တယ်။
အမျိုးသားများအတွက် ခွဲစိတ်ပြီး vasectomy သားကြောဖြတ်တာ မိနစ် ၂၀ ကြာတယ်။ ဒါလုပ်ဖို့ ထုံဆေးပဲ လိုပါတယ်။ သုက်ပိုးတွေ လိင်ဆက်ဆံရာမှာထွက်တဲ့အရည်ထဲ၀င်မလာဖို့ ကပ်ပယ်အိတ်မှာ ခွဲစိတ်ရာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သုက်ပိုးထွက်မလာနိုင်တာကြောင့် မိန်းမမှာ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါ။
အမျိုးသားများအတွက် no-scalpel vasectomy နည်းလမ်းက ပြွန်တွေဆီရောက်ရှိတဲ့ အပေါက်သေးတစ်ပေါက် ပါ၀င်တယ်။ အဲ့နောက် ပြွန်တွေကို ချည်ထားတာ၊ ခဲသွားအောင်cauterized ဒါမှမဟုတ် ပိတ်သွားအောင် လုပ်ပါတယ်။ အမာရွတ်မရှိ၊ ချုပ်စရာမလို၊ ပြဿနာမရှိပဲ အတော်လေးမြန်မြန် အနာကျက်တာကြောင့် လူသိများတယ်။
လုံးဝသေချာမှုရှိ သားကြောဖြတ်ခြင်းမလုပ်ခင်မှာ သင့်သွေးသားနဲ့ ကလေးများ မမွေးလိုကြောင်း ၁၀၀% သေချာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူ ရယူသင့်သလဲ အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး များကို သားကြောဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အတူနေရန်စီစဉ်နေပါက ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို ဘယ်သူ ရယူသင့်သလဲဆိုတာ တိုင်ပင်ပြောဆိုပါ။
ဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ရာမလို။ ဟော်မုန်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးမပြုလိုပါ ဒါဟာရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားကြောဖြတ်တာဟာ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ သဘာဝဟော်မုန်းများကိုမပြောင်းလဲစေပါ။
မိသားစု ကြီးမားသည်။ သင့်မှာကလေးတွေလုံလောက်ပြီဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဒါက ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါက ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်လျှင်။ သင် (သို့) သင့်အဖော်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိရင် သားကြောဖြတ်တာဟာ ရွေးကောင်းစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သားကြောဖြတ်ခြင်း ခွဲစိတ်နည်း နှစ်မျိုးရှိသည်။ လှီးဖြတ်ခြင်း (ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ဖြတ်တောက်သည်) နှင့် လှီးဖြတ်မှုမရှိခြင်း (ခွဲဖြတ်ရာ မရှိ) ။ 
အမျိုးသမီးများအတွက်: လှီးဖြတ်ခြင်း နည်းလမ်းများတွင် Laparoscopy၊ Mini-laparotomy နှင့် Laparotomy တို့ပါဝင်သည်။ Laparotomy သည် ခွဲစိတ်ကုသမှုသုံးခု၏ အကြီးမားဆုံး ခွဲစိတ်မှု ဖြစ်ပြီး ဒီလိုခွဲစိတ်မှုကို အနညးဆုံးသာ လုပ်ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံတက်ဖို့ရက် အနည်းငယ်လိုပြီး ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် ကြာနိုင်ပါတယ်။ Laparoscopy နှင့် Mini-Laparotomy တို့ကတော့ သိပ်မပြင်းထန်ပဲ၊ ဆေးရုံညအိပ်တက်ပြီးကုသဖို့ မလိုအပ်ပါ။ ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အချိန်လဲ မြန်ပါတယ်
အမျိုးသားများအတွက် : – လှီးဖြတ်ခြင်း နည်းလမ်းသည် vasectomy ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးထံသွားရန်လိုသော်လည်း ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း ညအိပ်တက်ဖို့ မလိုအပ်ပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် ကပ်ပယ်အိတ်ကိုထုံစေပြီး၊ လှီးဖြတ်ရာအသေးလေးပေး၍ ပြွန်ကို ချည်နှောင်ပြီး ဖြတ်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ခွဲစိတ်မှုက သုက်ပိုးကို သုတ်ရည်ထဲ မ၀င်အောင် တားပေးပေမဲ့ သုတ်ပိုးဟာပြွန်ထဲမှာလအတန်ကြာခိုကပ်နေနိုင်ပါတယ်။ လှီးဖြတ်ရာလေးဟာ ချုပ်ဖို့ မလိုပဲ မြန်မြန်အနာကျက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တခြား(ကွန်ဒုံးကဲ့သို့) သန္ဓေတားနည်းကိုသုံးလခန့် သုံးသင့်ပါတယ်။
အလွန်ရှားတဲ့စိုးရိမ်စရာတခုကတော့ သင့်ပြွန်တွေဟာသူ့ဖာသာပြန်ဆက်သွားပြီး – ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေနိုင်
ခွဲစိတ်မှုအရ ဖြစ်နိုင်တဲ့ သွေးထွက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း (သို့) မေ့ဆေးထုံဆေးဆန့်ကျင်ခြင်းကဲ့သို့ ပြဿနာများ
သင့်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါကို မကြိုက်သေးဘူးလို့ခံစားရရင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေရှိပါတယ်။ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်များစွာကတဲက သားကြောဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘာ့ကြောင့်မောပန်းပြီး နာနေရပါသလဲ။ 
ဒီလုပ်ဆောင်မှုအပြီးရက်ပိုင်းမှ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထိကို နာကျင်၊ မောပန်းခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ သင်စိုးရိမ်နေပါက သို့မဟုတ် သင့်အစွမ်းခွန်အား မကြာခင်ပြန်မရပါက သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ဆက်သွယ်သင့်သည်။
မိမိမှာ သားကြောဖြတ်ထားပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာပြနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား?
သားကြောဖြတ်ခြင်းသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး အမြဲတမ်းအတွက် ရည်ရွယ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ လျှင် ၅ ဦး ခန့်ဟာ အဲဒီလုပ်ဆောင်မှုအပြီးတစ်နှစ်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရလာတယ်၊ အဲဒီအန္တရာယ်အသေးလေးတော့ သွေးဆုံးချိန်အထိရှိနေတယ်။
သားအိမ်အတွင်းသားခွဲစိတ်ခဲ့ရလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ သားကြောဖြတ်ခြင်းဟာ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလား။
သားအိမ်သားခွဲစိတ်ရပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ဆောင်ဖို့မသင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်အတွင်းသား ခွဲစိတ်ခဲ့ရဖူးသော အမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးဆုံးပြီးသည်ထိ သန္ဓေတားဆေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်မှုအပြီး ကိုယ်ဝန်ရရန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ သားအိမ်အတွင်းသား ခွဲစိတ်ခဲ့ရဖူးပြီးရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဟာ ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သင် (နောက်ထပ်) ကလေးများမလိုချင်တာ သေချာမသိပါက သားကြောဖြတ်ခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ သားအိမ်အတွင်းသားခွဲစိတ်ခဲ့ရဖူးပြီး အစီအစဉ်မရှိပဲကိုယ်၀န်ရမှာကို ဘယ်အခါမှ ပူပန်စရာမလိုတော့အောင် သေချာစေဖို့ သားကြောဖြတ်လိုက်တာဟာ ရွေးကောင်းစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။